Sawirro: Siciid Deni oo kulamo xasaasi ah ka bilaabay Muqdisho | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Sawirro: Siciid Deni oo kulamo xasaasi ah ka bilaabay Muqdisho
Sawirro: Siciid Deni oo kulamo xasaasi ah ka bilaabay Muqdisho
Madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo haatan ku sugan magaalada Muqdisho ayaa kulamo la qaatay Xildhibaannada Golaha Shacabka, Senatarada Aqalka sare iyo Wasiirada Xukuumadda ee kasoo jeeda maamulkaasi.
Labada dhinac dhanba dhanka kale uu ka xog dhageystay howlaha socda iyo xaaladda siyaasadeed ee dalka.
Sidoo kale Deni ayaa u bandhigay mas’uuliyiinta labada Gole ee DFS in ay kaalin ka qaataan qorshaha lagu diiwaangelinayo Ciidamada maamulkaas oo meelaha qaar muran ka dhashay una arko in ay ka qaybgali karaan xalinta howshaan, Howlaha Geedi socodka dalka, fulinta nidaamka dimuqraadiyadda iyo dib u habeynta maaliyadda iyo kaabayaasha dhaqaalaha.
Dhankooda Wasiirada waxa ay u gudbiyeen qorshaha wada hadalka Madaxweyneyaasha Puntland iyo Jubbaland ay la leeyihiin Madaxweynaha JFS Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xubnahaan qaarkood saaxiibo dhaw ay yihiin.
Maqaal horeXubno ka tirsan Al-Shabaab oo lagu dilay gobolka Shabeelaha Hoose
Maqaal XigaJubbaland oo shaaciyey arrimaha la’isku fahmi la’yahay ee shirka Muqdisho